Shiinaha Tubular Faashadda warshad iyo alaab-qeybiyeyaal | ASN
Daawaynta, daryeelka kadib iyo kahortaga soo noqoshada dhaawacyada shaqada iyo isboortiga, daryeelka kadib daryeelida xididdada xididdada varicose iyo qalliinka iyo sidoo kale daweynta xidid la'aanta xididka.
Dabacsanaan sare, waa la dhaqi karaa, waana la nadiifin karaa.
Kordhinta waxay ku saabsan tahay 180%.
Faashad xoog leh oo joogto ah oo istiraatiijiyadeed oo leh fiditaan sare oo loogu talagalay cadaadiska la xakamayn karo.
Xirxirida: Baakadaha kartoonka
J: Waxaan nahay warshad leh liisanka dhoofinta
S: Sidee ku saabsan shuruudaha lacag bixinta ee is-dhaafsiga ah?
J: Waxaan aqbalnaa 30% dhigaalka, iyo 70% dheelitirka ka hor rarka.
S: Sideen ku heli karaa tijaabooyinka qaarkood?
1.Waxaa sharaf noo ah inaan ku siinno tijaabooyin. Macaamiisha cusub waxaa laga filayaa inay bixiyaan kharashka dirista iyo muunada, khidmadaan waxaa laga goynayaa bixinta nidaamka rasmiga ah.
2.Qiimeynta qiimaha dirista: waxaad qabanqaabin kartaa adeeg RPI ah Fedex, UPS, DHL, TNT, iwm. ama noo sheeg koontadaada aruurinta DHL. Kadib waxaad toos ugu bixin kartaa xamuulka xamuulka shirkadaada deegaanka.
S: Sidee ayay warshaddaadu u qabataa xakamaynta tayada?
J: "Tayada ayaa ahmiyada koowaad leh. Waxaan marwalba muhiimad weyn siinaa xakamaynta tayada bilow ilaa dhamaad:
1) .Dhammaan alaabta ceyriinka ah ee aan isticmaalnay waa kuwo deegaanka u wanaagsan;
2) .Shaqaalaha hawl karka ahi waxay daryeelaan faahfaahin kasta oo ku saabsan maaraynta wax soo saarka iyo baakadaha;
Hore: Faashad is-koolo ah
Xiga: Faashad Malaas